သတ္တုတွင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်း: သိပ်နောက်ကျလွန်း - တရုတ် JP သတ္တု & ပစ္စည်း
လက်ရှိသတ္တုတူးဖော်ရေးဥပဒေပြဌာန်းဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြင်ဆင်ချက် ပို. ပို. လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အမှားအယွင်းများနှင့်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုပြီးခဲ့သည့်မိနစ်ဖြည့်စွက်အတွက်ချ bogged ဖြစ်လာရသည်။
ယင်းသတ္တု & ရေနံအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအက်ဥပဒေ (MPRDA) ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းဝန်ကြီး Mosebenzi Zwane ရဲ့ကတိထားတော်အဆုံး-ဇွန်လနောက်ဆုံးရက်တွေ့ဆုံရန် national assembly ကိုကအတည်ပြုရင်တောင်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးတှငျစိန်ခေါ်ခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ ဤသည်သတ္တုတွင်းကဏ္ဍ ပို. ပင်မသေချာမရေရာ add ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပြင်ဆင်ချက်ကိုသူတို့သတ္တုတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေအတိုက်အခံကြုံတွေ့ပိုင်းတွင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အကြောင်းကိုခြောက်နှစ်များအတွက်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် inching ပါပြီ။ Jacob Zuma ကိုပြည်နယ်နှင့်ရိုးရာခေါင်းဆောင်များနှင့်မလုံလောက်သောလူထုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဖြစ်ကကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များချိုးဖောက်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေထမြောက်တော်မူသောကြောင့်, ဗားရှင်းနောက်ဆုံးတော့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးသမ္မတ Jacob Zuma ထံသို့စလှေတျခဲ့သည့်အပေါ်သဘောတူပြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်။
ပြည်နယ်များနှင့်အတူတိုင်ပင်၏သင်တန်းမှာတော့တွင်းထွက်သယံဇာတများဌာနသည်ယခုအခါအခြား 57 ပြင်ဆင်ချက်မိတ်ဆက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ DA အရိပ်ဓာတ်သတ္တုသယံဇာတများကိုဝန်ကြီးဂျိမ်း Lorimer သူတို့ထဲကအများစုဟာရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီများကကြီးပြင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းရန်ပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအခြားသူတွေရှိပါတယ်။
တဦးတည်းကြောင်းကုမ္ပဏီများက 50% ပေါင်းတစျခုဝေစု၏အနက်ရောင်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိရမည်အသေးစားသတ္တုတူးဖော်ရေးခွင့်ပါမစ်များအတွက် (ကြာချိန်အတွက်သုံးနှစ်နှင့်အတိုင်းအတာထဲမှာ 3ha အထိ) အရည်အချင်းပြည့်မီရန်ဖြစ်ပါသည်။ Lorimer ကဒီအောင်မြင်ရန် alluvial စိန်မိုင်းလုပ်သားများအတွက်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲသည်ဟုဆိုသည်။ ကျောက်မီးသွေးဝယ်ယူရေးအဘို့အ Eskom ရဲ့အလားတူပိုင်ဆိုင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ coupled ကြောင့်လည်းသတ္တုတွင်းစင်းလုံးငှားအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အဓိကသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများအားသတိပေးအချက်ပြပေးပို့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, နောက်ဆုံးပေါ်ပြင်ဆင်ချက်ထိုကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များနှင့်ဥပဒေကြမ်းဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိပါးသည်ဟုဆိုသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း '' ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် ပတ်သက်. Jacob Zuma ကိုရဲ့သံသယအဖြစ်ပိုပြီးသိသိသာသာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, ဖြေရှင်းကြပါဘူး။
ပြည်နယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနောက်, ဥပဒေကြမ်းနောက်တဖန်ပါလီမန်နှစ်ဦးစလုံးအိမ်များကအတည်ပြုခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ခွင့်ပြုချက် ANC ကယ့်အများစုရှိနေသော်ငြားလည်း, ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ content ပေါ်နောက်ဆက်တွဲစိန်ခေါ်မှုများများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသောမည်သည့်သေချာမှုအောင်မြင်ရန်မည်မဟုတ်, Lorimer ကပြောပါတယ်။
သတ္တုတွင်းများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းများအတွက်တစ်ဦးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အခနျးသစ်ကိုအဆိုပြုပြင်ဆင်ချက်သတိထားနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များနှင့်ပြည်နယ်များ (NCOP) ၏အမျိုးသားရေးကောင်စီမှတင်ပြစေရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ကပြောပါတယ်။
ပတေရုသလီယွန်, ဟားဘတ်စမစ် Freehills လုပ် SA မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဌာန၏ကြောင်းလွှဲပြောင်း၏နယ်ပယ်အပြင်ဘက်သစ်ကိုပြင်ဆင်ချက်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပြည်နယ်များမှဥပဒေကြမ်း၏သမ္မတလွှဲပြောင်းအသုံးပွုနိုငျမယုံကြည်ပါဘူး။
သမ္မတကျောပါလီမန်တစ်ဦးဥပဒေကြမ်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာပါလီမန်၏ပူးတွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသည်, အစုစုကိုကော်မတီကကြောင့်တညျ့, ဒါမှမဟုတ်ရန်မရနိုင်လျှင် rescind ရန်, သမ္မတ၏အကြံပြုချက်များကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုပြန်ဥပဒေကြမ်းပေးပို့ဖို့အမျိုးသားရေးစည်းဝေးပွဲကိုအကြံပေးရမယ် တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လမ်းအတွင်းချွတ်ယွင်းပြင်ပေးဖို့ဖြေရှင်းရန်။
national assembly ကိုသမ္မတကဖော်ထုတ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ချွတ်ယွင်းပြင်ပေးဖို့ NCOP ဖို့ဥပဒေကြမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်နှင့်, NCOP ကို ​​select လုပ်ပါကော်မတီကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်သန်းပါကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့သံသယမှချုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့အားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာလ compressed ခဲ့ကွောငျးတို့ကြောင့်မလုံလောက်အသိပေးစာပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များအားဖြင့်ကျင်းပသည့်အများပြည်သူကြားနာ၏ပေးထားခဲ့သည်။
Leon ကမှန်ကန်သောဖြစ်စဉ်ကိုနောက်တော်သို့လိုက်မခံခဲ့ရပုံပေါ်ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါ NCOP ကို ​​select လုပ်ပါကော်မတီကိုကခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းဟာမျက်နှာစုံညီ NCOP က resolution ကိုမပါဘဲပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းအတွက်သူများထက်အခြားလုပ်ရပ်မဆိုပြင်ဆင်ချက်လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါဟာ 2014 ခုနှစ်မတ်လအတွင်းက၎င်း၏အများပြည်သူပါဝင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်မတိုင်မီလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ကိုမရှာခဲ့ပါဘူး။
"ဟုအဆိုပါဦးစီးဌာနတို့ကမိတ်ဆက်သည့်အပိုဆောင်းပြင်ဆင်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ကျနော်တို့ဥပဒေဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်၏ဤအဆင့်မှာမဆိုပြင်ဆင်ချက်အဘို့မပေးပါဘူးသောအမြင်ရှိပါတယ်," Nicola Jackson က, ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Fasken Martineau မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကပြောပါတယ်။ "ဒီ NCOP ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ 79 ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သမ္မတကပြန်ပါလီမန်ရည်ညွှန်းသောဥပဒေမူကြမ်းပြင်ဆင်လို့မရပါဘူး။
အဆိုပါဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်စင်တာတွင်ဖွင့် Henk Smith ကပါလီမန်၏ပူးတွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုယခု 57 ပြင်ဆင်ချက်၏နိဒါန်းအဘို့ခွင့်ပြုမလီယွန်နှင့်အတူသဘောတူ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဥပဒေကြမ်းနှင့်အသစ်ပြင်ဆင်ချက်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း '' စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းမတကယ်တော့လက်ရှိလုပ်ရပ်အတွက်အနည်းငယ်မျှသာအသိုင်းအဝိုင်းပါဝင်မှုမှေးမှိန်, သူကပြောပါတယ်။
Lorimer စိန်ခေါ်မှုမှဖွင့်လှစ်ကြောင်းတစ်ခုလုပ်ရပ်ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမသေချာမရေရာဖြည့်စွက်, ဒါပေမယ့်တိုင်းငါးနှစ်ကြာလုပ်ခံရသတ္တုတွင်းစင်းလုံးငှားဖို့ပြောင်းလဲမှုများကိုမည်သည့်ကိစ္စများတွင်စနစ်သို့မရေရာတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ ဒါဟာလုပ် SA ရဲ့သတ္တုတူးဖော်ရေးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုတည်းကိုသာခရိုနီဖို့အခွင့်အရေးများပေးခြင်းရည်ရွယ်သောဌာန၏လက်ရှိခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာပိုပြီးသိသာလာသူကပြောပါတယ်။